भोलि साउनको पहिलो सोमबार, शिवको प्रिय दिन : तपाईको लागि कस्तो रहला ? – Khabar28media
तपाइको दिन राम्रो तथा आनन्दमा बित्नेछ । शारीरिक तथा मनिशिक रुपमा स्वस्थ हुनुहुनेछ । मध्यान्न पछी कुनै पनि शुभ कार्य नगर्नुहोला । बोलि तथा व्यवहारमा संयम राख्नुहोला । जसले तपाइलाई राम्रो गर्दछ। सत्रु सक्रिय हुने हुदा सजग रहनुहोला । आध्यात्मिक शिद्धि प्राप्त हुनेछ । चिन्तन मनन्ले तपाइको मनलाई शान्ति प्रदान गर्दछ।
व्यवसायमा फाइदा हुनेछ । सहयोगी बाट सहयोग प्राप्त हुनेछ। आर्थिक लाभ हुनेछ । प्रतिस्पर्धी लाइ पराजित गर्न सकिनेछ। दिनको मध्यान्न पछी रमाइलो कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ । मन प्रफुलित हुनेछ। नयाँ वस्त्र तथा घरायसी सामान खरिदाको लागि धन खर्च हुनसक्छ। मान सम्मान बढ्नेछ ।
आज तपाइको दिन् बौद्धिक कार्य तथा चर्चामा बित्नेछ। तपाइ कल्पना र रचनात्मकता कार्यमा जोड दिनुहुनेछ । शारीरिक तथा मानशिक रुपमा सचेत रहनु होला। व्यवसाहिक हरुको लागि व्यापारमा फाइदा हुनेछ। घरमा शान्तिको वातावरण बनेछ । प्रतिस्पर्धाहरूको बीचमा विजयी हुनुहुनेछ। सहयोगी बाट सहयोग पाउने हुनेछ।
निरास पनाले मनलाई थकित बनाउने छ। जसको कारण तपाइ शारीरिक तथा मानशिक रुपमा अस्वस्थ अनुभव गर्नुहुनेछ। बसाइ सराइको लागि दिन राम्रो छैन । अचल सम्पति तथा वाहनको समस्याले सताउन सक्छ । दिउसोको पछि तपाई खुशी अनुभव गर्नुहुनेछ। साथि बाट सहयोग मिल्नेछ । शारीरिक उर्जा अनुभव गर्नुहुनेछ। धेरै विचारहरूले तपाइको मनलाई विचलित गर्दछ।
छोटो यात्रा हुनेछ। विदेशीहरूले राम्रो समाचार पाउनेछन्। धन लाभ हुनेछ। नयाँ कामको थालनी गर्नको लागि राम्रो समय राम्रो छ। मध्यान्न पछी तपाइँ सहनशील हुनुहुनेछ। मानशिक हतास हुनेछ । शारीरिक स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। पारिवारिक तथा जमिन सँग सम्बन्धित समस्याले सताउन सक्छ।
राशिकन्या – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (Virgo) :मन स्थिर नहुने हुदा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी नगर्नु होला । बोलीमा संयमता राख्नुहोला । अन्यथा मन दुख्न सक्छ। परिवारका सदस्यसँग वादविवाद हुनसक्छ । शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको ध्यान राख्न पाउनु हुनेछैन। दिउसो पछी तपाइको दिन् अनकुल हुनेछ। महत्त्वपूर्ण विषयमा साथिभाइसँग कुरा हुनेछ।
कलात्मक तथा सिर्जनात्मक क्षमत वृद्धि हुनेछ । शारीरिक तथा मानशिक रुपमा स्वस्थ अनुभव गर्नुहुनेछ। मनोरंजन तथा वस्त्र खरिदमा धन खर्च हुनेछ । मध्याह्नपछि मनमा दुबिधा बढ्नेछ । जसको कारण सहिनिर्णय लिनको लागि कठिन हुनेछ । परिवारक सदस्यसँग विवाद बढ्नेछ ।
तपाइको उग्र तथा अनियन्त्रित व्यवहारको कारण समस्यामा पर्न सक्नु हुनेछ। आफन्त सँग केहि भना भन हुनसक्छ। दिनको मध्यान्न पछि मनलाई शान्त राख्न सक्नुहुनेछ। आर्थिक आयस्रोतको योजना हुनेछ । तपाइको आत्मा विश्वाश बढ्नेछ ।
व्यवसायको क्षेत्रमा लाभदायायक दिन रहेको छ । परिवारको सदस्यसँग रमाइलो वातावरण हुनेछ। कार्य क्षेत्रमा पद बढ्नेछ। साथी भाइ सँग रमाइलो यात्रा हुनसक्छ । व्यापारमा लाभ हुनेछ। स्वास्थ्यमा समस्या हुनसक्ने हुदा सजग रहनु होला । व्यवसायमा बोलिमा बिशेस ध्यान दिनुहोला। अन्यथा समस्यामा पर्न सकिन्छ ।
तपाइको दिन आनन्दमय हुनेछ। परिवारमा शुख शान्ति छाउनेछ । व्यवसायमा पद बढ्नेछ । व्यापारिक क्षेत्रमा समय अनकुल हुनेछ। सहकर्मचारीसँग सहकार्य हुनेछ। साथी भेट हुनेछ साथै रमाइलो स्थानको भ्रमण हुनेछ। आय बढ्नेछ व्यापारी हरुको लागि लभदाएक समय रहेको छ ।
सिर्जनात्मक कार्यमा तपाइ उल्झनमा पर्नुहुनेछ । नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ। लामो तिर्थयात्रा हुनसक्छ। व्यवसायमा लभ हुनेछ। स्वास्थ्यको बिशेस ध्यान दिनुहोला । परिवारमा खुशीको वातावरण छाउनेछ । माताको तर्फबट लाभ हुनेछ। उत्तम शुख प्राप्ति हुनेछ । सरकारी कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ
संयमित भएर हिड्नु होला । नजिकका शत्रु बाट सजग रहनुहोला । स्वास्थ्यको बिशेस ध्यान राख्नुहोला । ज्ञान तथा विद्याप्राप्तिको लागि सहि समय रहेकोछ । विदेशमा रहेका मित्रको शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। व्यवसायमा सहयोग प्राप्त हुनेछन्। कसैसँग वादविवादमा नपर्नु होला ।
Previous Article हे दै’व ! फेरि गयो गोरखा र धादिङमा ख`त’रनाक बाढी पहिरो, ५ जनाको मृ`त्यु, चिच्याउदै भागाभाग ! (भिडियो हेर्नुस्)
Next Article अन्त:त बिना भेटिदा कुसुमले प्रबेशको एस्तो पो’ल खोलिन, अब दुइटै लाई यस्तो स जाय ! (भिडियोसहित)